Isimo Sezulu Phobias Sikhona | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kunezikhathi zonyaka lapho abantu bezizwa bedangele kakhulu, bezwela kakhulu futhi besengozini yezimo ezahlukahlukene abazithola bekuzo. Eziningi zalezi zimo zingenzeka ngenxa ye- izinguquko ngokuhamba kwesikhathi.
Izici ezahlukahlukene ezifana namahora emini ekupheleni kosuku, izinguquko zesizini, noma ngabe usuku lushonile noma cha ngaphansi zibhekene nokuphazamiseka okuthile kubantu. Zibizwa ngokuthi iziyaluyalu ezithinta izinkathi ezithile zonyaka futhi zivame ukuthinta ngaphezulu noma ngaphansi kuka-15% wabantu. Kodwa-ke, lokhu kuvame kakhulu, kepha kunephesenti elincane labantu eliveza uhlobo oluthile lokwethuka noma ukwesaba ngaphambi kwezimo ezithile zezulu ezenzeka ngezikhathi zonyaka. Ingabe izingcingo isimo sezulu esibi
1 Isimo sezulu sezulu
2 Izimpawu kubantu abaphethwe yilo
3 Izimbangela eziyinhloko zesimo sezulu
4 Imithi yokwelashwa yalaba bantu
Isibonelo, kukhona uhlobo lwe-meteorological phobia, okuthi kubantu abaningi kuyisimo sobuhle obukhulu noma isimo sothando semibhangqwana, njengokwesaba inyanga egcwele (selenophobia). Amanye ama-phobias nawo angajwayelekile nokuthi kubantu abaningi anobuhle nokubabazeka ukwesaba ukuntwela kokusa (i-eosophobia) namalambu asenyakatho (auroraphobia).
UMar Gomez, ungudokotela wesimo sezulu we Isikhathi yilesi futhi uchaze ezinye zezifo ezingokwengqondo laba bantu ababhekana nazo. Okufanele wonke umuntu kuhle futhi kuyancomeka, ngoba laba bantu kuyimbangela yokukhathazeka. Imvamisa, lokhu kwesaba kukhuthazwa yisizathu esithile esiholela lowo muntu ekuhlangabezaneni nalezi zimo zokukhathazeka kweqiniso. Ngakho-ke, uMar uncoma ukuthi abantu abahlushwa lolu hlobo lwe-phobia bazibeke ezandleni zochwepheshe futhi bangalokothi bazame ukubhekana nalolu hlobo lokuphazamiseka bodwa.
Izimpawu kubantu abaphethwe yilo
Ukwazi umuntu ophethwe yilolu hlobo lwe-phobia, izifundo ezahlukahlukene kanye nophenyo lwenziwe ngongoti bezengqondo nabelaphi. Lezi phobias zivame ukuhambisana neziqephu zokuguqulwa noma i-tachycardia. Ngokuvamile, umuntu ophethwe yilo uzizwa inhliziyo yakhe ishaya ngokushesha, eqala ukujuluka ngokuphawulekayo futhi lokhu kuholele ekushayeni okungahle kube okuyingozi empilweni.
Inkinga ngalezi phobias, njengabanye abaningi, ukuthi zivame ukuqhutshwa ngasese. Iningi labantu linamahloni okuphawula futhi lichaze ama-phobias abo kwabanye abantu ngokwesaba ukugconwa noma ukungamukelwa kwabanye. Yingakho lezi zinkinga zingaziwa kahle. Kungenzeka ukuthi ngenxa yalokhu kungazi okusabalele, inani labantu abahlushwa yilezi phobias kukhulu kunokwaziwa.
La ukuzwela kwemvelo, eqanjwe ngenhla, ihlobene nezinguquko zenkathi, amahora okukhanya kwelanga, njll. Lokho kudala izinguquko ezimeni zabantu. Zithinta i-15% yabantu futhi zivame kakhulu. Kukhona nezinye izimo zezulu ezibhekene nezifo ezithile zomzimba ezinjengobuhlungu emajoyintini, imisipha, i-migraines nokunye.
Izimbangela eziyinhloko zesimo sezulu
Phakathi kwazo kukhona ifa. Uma umama noma ubaba enayo, kunethuba lokuthi isizukulwane esilandelayo naso sizokuba nayo. Zikhona futhi ngenxa yohlobo oluthile lokuhlukumezeka empilweni yomuntu ohlotshaniswa naye isipiliyoni esibi ngezinsuku zemvula enamandla, umoya, noma inyanga egcwele.
Iningi lalezi phobias zenzeka zisencane impela, cishe iminyaka emihlanu futhi okuvame kakhulu ukwesaba inyanga egcwele, umbani, imvula enamandla noma izivunguvungu. Lezi zamuva zilungiswe kancane yibhayisikobho. Kuma-movie amaningi asabisayo, ezigcawini ezethusayo nezesabekayo umhlaba ubumnyama, nenyanga egcwele, noma umbani.
Imithi yokwelashwa yalaba bantu
Ukuze welaphe ama-phobias, kunezindlela zokwelapha ezahlukahlukene. Phakathi kwazo kukhona ukwelashwa kwengqondo. Kuqukethe isiguli esithola kubasebenzi abakhethekile yonke imininingwane ephathelene naleso simo abayesabayo, ukuze ngale ndlela, isiguli sikwazi ukuyibona njengento engenabungozi futhi sibheke ukuthi i-phobia yabo iyinto engenangqondo.
Enye ingu ukwelashwa okuvezwa kancane kancane lapho isiguli sisondela kancane kancane kwisimo sezulu okukhulunywa ngaso, sinezimo lapho sizibonela khona mathupha. Isibonelo, uma wesaba umbani, kancane kancane uya ohlangothini lwefasitela ukuze ulibone ngenkathi uzizwa uvikelekile futhi uphephile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ama-phobias wesimo sezulu akhona
Sawubona isiJalimane! Ngiyithandile impela indatshana yakho futhi ithole imininingwane emisha maqondana nesimo sezulu, iqiniso ukuthi bengingakaze ngicabange ukuthi othile unokwesaba okungenangqondo ngesimo sezulu ... kodwa impela angaba khona. Engingakuqondi kahle ukuthi ingakhula kanjani yi-Eosophobia, ukwesaba ukuphuma kwelanga, okungukuthi, uluthola nini lokho kwesaba? ngoba kunzima kimi ukukuqonda, mhlawumbe akekho onakho noma kukhula kuphela kwezinye izinhlobo zemiphakathi lapho ukuphuma kwelanga kusho okuhlukile ... angazi. Ukube bewazi noma yiliphi icala ungaba nentshisekelo.
Amanye ama-phobias abonakala enengqondo kimi, ngokwesaba iziphepho, ngicabanga ukuthi kungaba yinto ejwayelekile ezweni elifana neSpain lapho izinhlekelele zenzeka khona ngezikhathi ezithile ngenxa yokwehla kwamakhaza noma izimvula ezinkulu (iBiescas…).
Kuzodingeka wenze enye indatshana lapho abantu behehwa kunoma yiziphi zalezi zenzakalo, njengabazingeli bezinkanyamba, ukuthi iphupho labo kuphela ukuba ngaphakathi kwesiphepho.
Umsebenzi omuhle futhi ngiyabonga.
Gerardo omuhle, ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho nangentshisekelo yakho. Ngicabanga ukuthi uma amanye ama-phobias ekhula ngenxa yokuhlukumezeka ebuntwaneni, kungenzeka ukuthi abanye babantu ababonakala benokwesaba kokuphuma kwelanga bavele kokuhlangenwe nakho okubuhlungu ngokuphuma kwelanga ngemuva.
Ngithatha lo mbono kuwe, kungakuhle ukubhala okuthunyelwe ngabantu abathandwa yizimo zezulu.